DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA NVIDIA GEFORCE GTX 560 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ụzọ maka ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GTX 560
Anyị ga-atụle nhọrọ niile ị ga-ahụ maka ịkwọ ụgbọala maka ihe ntaneti vidiyo na ajụjụ. Onye ọ bụla n'ime ha dị mfe n'ụzọ nke ya ma bụrụ naanị ị nwere ike ịhọrọ onye ị ga - eji.
Mgbe ị na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ ọ bụla, n'ezie, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga na saịtị ahụ. Ya mere, ị na-ewepụ ihe ize ndụ nke nje virus na-etinye na kọmputa gị.
Gaa na saịtị NVIDIA.
N'elu saịtị ahụ chọta bọtịnụ ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala" ma pịa ya.
Na ibe ị hụrụ, ị nwere ike ịkọwa ngwaọrụ nke anyị na-achọ software. Iji nchịkọta ọdịda pụrụ iche, họrọ kaadi vidiyo gị ma pịa bọtịnụ. "Chọọ". Ka anyị lebakwuo anya ugbu a:
Ụdị Ụdị: GeForce;
Ngwaahịa: GeForce 500 Usoro;
Usoro usoro: N'ebe a na-egosi OS gị na bit omimi;
Na peeji na-esote ị nwere ike ibudata ngwọta ahụ a họọrọ site na iji bọtịnụ ahụ "Download ugbu a". Nakwa ebe a, ị nwere ike ịchọtakwu ihe omuma gbasara ozi nbudatara.
Wee gụọ ọgbụgba ikikere njirimara njedebe ma pịa bọtịnụ. "Nabata ma budata".
Mgbe ahụ, onye ọkwọ ụgbọala ahụ ga-amalite ibugharị. Chere ruo mgbe ngwụsị nke usoro a ma na-agba faịlụ nwụnye (ọ nwere ndọtị * .exe). Ihe mbụ ị ga - ahụ bụ window nke ịchọrọ ịkọwa ọnọdụ nke faịlụ ndị a ga - arụnyere. Anyị na-akwado ịhapụ dị ka dị na ịpị "OK".
Mgbe ahụ, chere ruo mgbe a ga-emecha nchịkọta faịlụ ahụ ma nyocha usoro njikọ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịnakwere nkwekọrịta nkwekọrịta ọzọ. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị na ala nke windo ahụ.
Window ọzọ ga - eme ka ị họrọ ụdị ntinye: Gwa ma ọ bụ "Omenala". N'okwu mbụ, a ga-etinye ihe niile dị mkpa na kọmputa ahụ, na nke abụọ, ịnwere ike ịhọrọ ihe ị ga-arụ na ihe agaghị etinye. Anyị na-akwado ịhọrọ ụdị mbụ.
N'ikpeazụ, ntinye nke ngwanro ahụ malitere, mgbe ihe ngebichi ahụ nwere ike ịmị ọkụ, yabụ echegbula ma ọ bụrụ na ị hụrụ omume ọjọọ nke PC gị. Na njedebe nke usoro ahụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Mechie" ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Usoro 2: Ọrụ na-emepụta ihe n'Ịntanet
Ọ bụrụ na ị maghị usoro sistemụ ma ọ bụ ihe ntanetịime vidiyo na PC gị, ị nwere ike iji ọrụ ntanetị na NVIDIA, nke ga-eme ihe niile maka onye ọrụ.
Tinyegharịa nzọụkwụ 1-2 nke ụzọ mbụ ị ga-apụta na peeji nke ọkwọ ụgbọala.
Ntughari ala, ị ga-ahụ ngalaba "Na - ahụ NVIDIA ọkwọ ụgbọala na akpaghị aka". N'ebe a ị ghaghị pịa bọtịnụ ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala eserese", dị ka anyị na-achọ software maka kaadị vidiyo.
Mgbe ahụ, usoro ntanetị ahụ ga-amalite, mgbe nke a gasịrị, a ga-egosipụta ndị ọkwọ ụgbọala akwadoro maka ntaneti vidiyo. Wepu ha na iji bọtịnụ Download ma wụnye dịka egosiri na usoro 1.
Usoro nke 3: Usoro GeForce na-arụ ọrụ
Ihe ntinye ọkwọ ụgbọala ọzọ nke onye ahụ na-emepụta bụ iji usoro GeForce Experience gọọmenti arụ ọrụ. Ngwaọrụ a ga-eleba anya ngwa ngwa maka ọnụnọ nke ngwaọrụ site na NVIDIA, nke ịkwesịrị imelite / wụnye software. Na mbụ na saịtị anyị, anyị nyere nkọwa zuru ezu banyere otu esi eji GeForce Experience. Ị nwere ike ịmatakwu ya site na ịpị njikọ ndị a:
Ihe ọmụmụ: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala Jiri NVIDIA GeForce Ahụmahụ
Nzọụkwụ 4: Software Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Ụwa
Na mgbakwunye na ụzọ NVIDIA na-enye anyị, e nwere ndị ọzọ. Otu n'ime ha bụ
eji mmemme pụrụ iche emebere iji kwado usoro ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka ndị ọrụ. Ngwa dị otú a na-enyocha usoro ahụ ma chọpụta ngwaọrụ dị mkpa ka emelite ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere. Site na ebe a, i nweghị enyemaka ọ bụla. Tupu mgbe ahụ, anyị bipụtara otu isiokwu nke anyị nyochare software kachasị ewu ewu dị otú a:
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịzo aka na ọkwọ ụgbọala. Nke a bụ ngwaahịa nke na-ewepụta ọnọdụ ya n'ụzọ ziri ezi na ndepụta nke usoro kachasị ewu ewu ma dị mfe maka ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Na ya, ịnwere ike ịwụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụrụ na ihe agazighị ezi, onye ọrụ nwere ike imeghachị usoro mgbe niile. Maka nkwekọrịta gị, anyị ejirila DriverMax na-arụkọ ọrụ, nke ị nwere ike ịmatakwu site n'ịgbaso njikọ dị n'okpuru:
Usoro 5: Jiri ID ahụ
Onye ọzọ na-ewu ewu, mana uzo ọzọ na-ewe oge na-etinye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji njirimara ngwaọrụ. Nọmba a pụrụ iche ga-enye gị ohere ibudata ngwanrọ maka ntanetị vidiyo, na-enweghị na-ezo aka na ngwanrọ ọzọ. Ị nwere ike ịchọta ID site "Onye njikwa ngwaọrụ" na "Njirimara" akụrụngwa, ma ọ bụ ị nwere ike iji ụkpụrụ ndị anyị họọrọ n'ọdịnihu maka mma gị:
PCI VEN_10DE & DEV_1084 & SUBSYS_25701462
PCI VEN_10DE & DEV_1084 & SUBSYS_25711462
PCI VEN_10DE & DEV_1084 & SUBSYS_25721462
PCI VEN_10DE & DEV_1084 & SUBSYS_3A961642
PCI VEN_10DE & DEV_1201 & SUBSYS_C0001458
Kedu ihe ị ga - eme? Naanị jiri ọnụ ọgụgụ achọtara na ọrụ Ịntanetị pụrụ iche nke pụrụ iche na ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site nchịpụta. Ihe niile ị ga - eme bụ ibudata ma wụnye ngwanrọ n'ụzọ ziri ezi (ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, ị nwere ike ịhụ usoro nhazi ahụ na usoro 1). Ị nwekwara ike ịgụ ihe anyị na-amụ, ebe a na-atụle usoro a n'ụzọ zuru ezu:
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a tụlere n'elu adịghị adabara gị, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume ịwụnye software site na iji ngwaọrụ Windows. Na usoro a, naanị ị ga-aga "Onye njikwa ngwaọrụ" na, site na ịpị na bọtịnụ vidiyo, họrọ ihe dị na menu ndị dị n'ime "Ọkwọ ụgbọala ọhụụ". Anyị agaghị atụle usoro a n'ụzọ zuru ezu ebe a, n'ihi na anyị bipụtara otu isiokwu na isiokwu a na mbụ:
Ya mere, anyị enyochala ụzọ isii ị nwere ike isi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GTX 560. Anyị nwere olileanya na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla. Ma ọ bụghị - jụọ anyị ajụjụ na ihe ndị a ga - aza gị.